“Waxaan markii hore Aaminsanaa in Hazard uu ka mid yahay xiddigaha ugu fiican Yurub, Laakiin hadda waan badelay Maankeyga…”. Tababare Sarri – Gool FM
“Waxaan markii hore Aaminsanaa in Hazard uu ka mid yahay xiddigaha ugu fiican Yurub, Laakiin hadda waan badelay Maankeyga…”. Tababare Sarri
(London) 16 Sab 2018. Eden Hazard ayaa shalay dhaliyay Saddexleydiisii ugu horreysay muddo afar sano kaddib kulanki ay Chelsea 4-1 uga adkaata Cardiff City.
Maurizio Sarri ayaa u sheegay Xiddiga reer Belgium in xilli ciyaareedkan uu dhalin karo 40-gool.
Macallinka reer Talyaani ayaa sidoo kale sheegay in markii hore uu aaminsanaa in Eden Hazard uu ka mid yahay xiddigaha ugu fiican Yurub balse uu iminka Maankiisa badelay isla markaana u qirsan yahay inuu yahay kan ugu fiican Yurub.
“Waxaan aaminsanaa in Hazard uu ka mid yahay xiddigaha ugu fiican Yurub laakiin hadda waan badelay Maankeyga oo waa kan ugu fiican, ” Sarri ayaa sidaa yiri.
“Waxaan u sheegay isaga in aniga ahaan uu dhalin karo 40-gool laakiin waa inuu tamar yar bixiyaa marka uu goolka ka fog yahay isla markaana uu ka ciyaaro uun 25-metre ee ugu dambeeya garoonka.
Haddii uu Sarri tilmaamay in Hazard uu dhalin karo xagaagan Afartan gool waxaa xusid mudan in wiilasha Liverpool iyo Tottenham ee Maxamed Saalax iyo Harry Kane ay dhaliyaan 40-gool iyo ka badan kal ciyaareedkii tagay.
Liverpool oo WARBIXIN ka soo saaray dhaawicii Shalay ISHA ka gaaray Roberto Firmino